Fepetra takiana mba hamaha ny Allied Races (ao anatin'izany ny torolàlana hamaha) | Draenei Lightforged, Void Elf, Dark Iron Dwarf, Game Guide, Nightborne, Draenor Orc, Reputations, Highmountain Tauren, Zandalari Troll | WoW Guides | WoW Guides
Fepetra takiana mba hamaha ireo mpiray dina (misy torolàlana mamoha)
Adrian Da Cuna | | Draenei maivana, Void Elf, Dwarf vy maizina, Game Guide, Nightborne, Orc an'ny Draenor, lazany, Tauren Highmountain, Zandalari Troll
Aloha! Torolàlana hahafantarana ny fomba famohana, ny hazakazaka, ny fiakarana, ny zava-bita ary ny kilasy misy ho an'ny tsirairay amin'ireo hazakazaka mpiara-dia amin'ny Battle for Azeroth.
1 Fepetra takiana mba hamaha ny firazanana mpiray dina
3 Fepetra takiana amin'ny firazanana
Fepetra takiana mba hamaha ny firazanana mpiray dina
Mividy mialoha ny ady manaraka ho an'ny fanitarana an'i Azeroth. Na ny kinova mahazatra na deluxe dia manome anao fidirana amin'ny firazanana mpiray dina.
Toetra iray farafahakeliny hatramin'ny 110
Ataovy ao an-tsaina fa raha vantany vao nanokatra hazakazaka iray na mpiray dina ianao dia voavaha ho an'ny kaonty iray manontolo, na inona na inona serivera misy anao.
Ho fanampin'ny fitakiana kaonty dia takiana ihany koa ny takiana karazana sasany. Ato ambany dia asehonay anao ny takiana ilaina amin'ny alàlan'ny karazany.
Fepetra takiana amin'ny firazanana
Vohay ny Torolàlana ho an'ny iraka
Kilasy misy: Hunter, Magicien, Monk, Pretra, Rogue, Warlock ary mpiady.
ara-poko: milaza ozona famosaviana, hanin-kotrana, tantara, AFI y Tohero.
Ny fepetra takiana amin'ny famohana ity hazakazaka ity dia: Misandratra amin'ny alina sy fikomiana.
Amin'ny famitana ny rojo fanokafana ny hazakazaka dia ho azonao alina
Kilasy misy: Druid, Hunter, Monk, Shaman ary mpiady.
Ny fepetra takiana amin'ny famohana ity hazakazaka ity dia: asandratra miaraka amin'ny Foko Highmountain sy fikomiana.
Zandalari Troll dia mbola tsy misy raha tsy amin'ny fanitarana manaraka. Ny hany takiana izay fantatra dia mila manana toetra 120 ianao.
Orc an'ny Draenor
Draenor Orcs dia mbola tsy misy raha tsy amin'ny fanitarana manaraka. Fantatra izy ireo fa hiseho eo afovoan'ny ady ho an'i Azeroth hoy i Ion Hazzikostas ao amin'ny Q&A BfA.
Ny fepetra takiana amin'ny famohana ity hazakazaka ity dia: asandratra miaraka amin'ny Voninahitr'i Argus sy fikomiana.
Kilasy misy: Hunter, Mage, Paladin, Pretra ary mpiady.
Ny fepetra takiana amin'ny famohana ity hazakazaka ity dia: Misandratra miaraka amin'ny Tafiky ny Mazava sy fikomiana.
Dwarf vy maizina
Ny maizina vy maizimaizina dia tsy mbola misy raha tsy amin'ny fanitarana manaraka. Ny hany takiana izay fantatra dia mila manana toetra 120 ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Fepetra takiana mba hamaha ireo mpiray dina (misy torolàlana mamoha)
winzun dia hoy izy:
Mila manana mpiara-miasa pj ve aho hanombohana mamoha ny elves tsy misy na ny draenei maivana? Kamo am-pahatsorana ny milalao fanovana avy amin'ny ankolafy hafa mba hamahana ireo hazakazaka vaovao.
Mamaly an'i winzun
Ny fanajana ny fepetra takiana ao amin'ny Horde na ny Alliance dia tsara ho an'ny rehetra. Ohatra, manana ny fepetra takiana amin'ny Horde aho ary tsy manana alis.
Kosmos dia hoy izy:
Fa avy eo ... ahoana ny fomba hidiranao amin'ny prequest ao amin'ny ambasady ao amin'ny tanàna lehibe? Midika izany fa rehefa mahazo ny zava-bitan'ny Nightborne Elves na Tauren Highmountain ianao dia mankany amin'ny Masoivoho Orgrimar mba hamita ny prequest ho azy ireo. Raha mahavita ny zava-bita ianao ho an'ny Void Elves sy Lightforged Draenei, aiza no hanombohanao ny prequests?
Mamaly an'i Kosmos
Tamin'ny zavatra nataoko teo aloha tao anaty ny hevitro dia nanazava mahafaty aho. Amin'ny "Tsy manana alis" aho dia midika fa tsy nanana ny fepetra takiana amin'izy ireo aho. Ny takiana dia manan-kery amin'ny Horde sy Alliance, fa rehefa manao ny rojo dia mila olona ianao ao amin'io ankolafy io amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Amiko, raha ny marina, ny hany zavatra miantso ahy amin'ny fanitarana dia ny Zandalari Troll.
Hanomboka ve ny fanitarana ary hiandry fotoana lava vao hahavitana azy ireo ??? satria raha izany ... tsy miditra akory aho mandra-pivoak'izy ireo ...
Valiny amin'ny hery
Na ny Zandalari Troll na ny Dark Iron Dwarves dia samy hisy mandritra ny fotoana aorian'ny famoahana ny BfA amin'ny volana Aogositra. Na dia ny tolo-kevitro aza dia ny hanomananao ny lehibe indrindra, ny iray amin'ireo fepetra takiana dia ny fanananao pj amin'ny 120 ho an'ny rojo.
Fanamboarana mivantana: 20 feb
Blizzard dia afaka nanao fanambarana momba ny Warcraft tsy ho ela